आफ्नो बलमा किन गर्दैन राजनीति माओवादी ? | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ चैत्र २७, शुक्रबार ०९:१९
सधैँ अर्काको बलमा, अर्काको बुईमा बसेर मात्रै उसले राजनीति धान्दै आएको हो । उसलाई भारत, अमेरिका,चीनले ’ल हामी भयौँ ’भनेर भरपर्दो आश्वासन नदिएसम्म, आदेश नदिएसम्म र काङ्ग्रेसले पूरै काँध नथापिदिएसम्म उस्ले ओली सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने राजनीतिक ह्याउ पनि प्रदर्शन गर्न सक्दैन ।
एक वर्ष देखि ओली विरूद्ध उफ्रिएका उफ्रियै छन् । भन्नु नभन्नु भनिरहेका छन्, राजनीतिमा सम्भव भएसम्मका असभ्य र अश्लील भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् ! राजनीतिमा लगाउनै नसकिने आक्षेप र अभियोग लगाइरहेका छन् । भए भरका कायर तर्क –कुतर्क गरिरहेका छन् । माओवादीले हिजो राजा विरूद्ध र आज ओलीविरूद्ध फैलाएको जस्तो भ्रम, झूठ, घृणा र लगाएको जस्तो लान्छना सम्भवत संसारको कुनै राजनीतिक शक्तिले लगाउँदैन, लगाउनै सक्दैन ।
दुनियाँ समस्त विकृति र खरावीको जड ओलीलाई मानेका हुन् । त्यहाँ मूल्य, विचार, आस्था, निष्ठा र प्रतिवद्धताको प्रश्न नै छैन । छ भने केवल भ्रम, अहंकार, झूठ र सङ्कीर्ण सत्ता स्वार्थ !
त्यसैले दुई वाक्य लेखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी संसदलाई गराउन सक्दैनन् । किनकी त्यहाँ लाभ हानीको काइते हिसाव किताव छ । राजनीतिमा यति ठूलो पाखण्ड र अनैतिकता सम्भवत माओवादी बाहेकका कसैले देखाउन सक्दैन ! तर राजनीतिक नैतिकताको कुरा उनीहरू नै बढी गर्दछन् ।
संविधान र कानुनका बाह्र सत्तरी कुरा गर्ने तर न संविधान र कानुन बमोजिम न समर्थन फिर्ता लिन हिम्मत गर्ने न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने तर सार्वजनिक रूपमा , मिडियामा एकोहोरो राजनीतिक तर्क र कुतर्क । झगडा आफ्नो, लडाइआफ्नो, स्वार्थ आफ्नो ––लडि़दिनु पर्ने अर्काले । अर्काको बैशाखीमा टेकेर अर्काको पिठ्यूँमा बसेर मात्रै राजनीति गर्ने । यसरी नै आएका हुन् उनीहरू आजसम्म । यही हो माओवादी राजनीतिको शैली !
Spread the loveकाठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँको अध्यक्षमा सूर्य सुवेदी विजयी भएका छन् । महासङ्घ काठमाडौँको बिहीबार राति सम्पन्न मतपरिणामअनुसार सुवेदी ७१३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वी मोहन पन्तले ३३७ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै उपाध्यक्षमा रामचन्द्र दुलाल (भाञ्जा), महिला उपाध्यक्षमा अप्सरा गौतम, सचिवमा […]
२०७७ चैत्र ३, मंगलवार ०९:५४
भ्रष्टाचारले विचार मार्दो रहेछ
२०७८ जेष्ठ २५, मंगलवार १४:१४
राजसंस्था नै थियो मुलुकको एकमात्र सन्तुलनकारी शक्ति